तीजको व्रत बस्दैहुनुहुन्छ, व्रतमा के खाने ? – समावेशी
तीजको व्रत बस्दैहुनुहुन्छ, व्रतमा के खाने ?
मंगलबार, भाद्र २६, २०७५ | १४:५७:०० |
दर खान सुरु गरेको धेरै हप्ता विते । तर खासमा आज राती खाने चाही दर हो । भोली विहानैदेखि व्रत बस्ने परम्परा अनुससार विहानै उज्यालो हुनपूर्व खाने चाही दर हो । धार्मिक मात्रै हैन शारीकि र मानसिक स्वास्थ्यको लागि व्रत बस्नु लाभदायक हुन्छ ।
कुनै विशेष पर्व या परम्पराअनुसार मात्रै हैन, हरेक साता एक दिन व्रत बसेर पाचन प्रणालीलाई आराम दिंदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने बताइन्छ । तर भोकै बस्नु मात्रै व्रत पक्कै होइन । यसका पनि केही विधि र प्रक्रिया छन् ।
व्रत बस्दा ध्यान दिन सकिएन भने स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ । त्यसकारण व्रत बस्दा विशेष ख्याल गर्न जरुरी छ । व्रत बस्दा शरीरलाई पानीको मात्रा अलि बढी नै चाहिन्छ । त्यसैले व्रत बसेको दिन पानी धेरै पिउनुपर्छ ।
व्रत बसेको दिन शरीरलाई चाहिने केही तत्व कम हुने भएकोले यो दिन सकेसम्म शारीरिक श्रम कम गर्ने । शरीरको ऊर्जा कायम राख्न कागती पानी खाँदा हुन्छ । त्यसमा मिश्री या मह मिसाएर खादा झन राम्रो ।
फलफूल र जुस खानु राम्रो मानिन्छ । व्रत बस्दा पनि दूध त खान हुन्छ भनिन्छ । दूधमा बदाम भिजाएर खाए झन राम्रो हुन्छ ।
यी चीज नखादा राम्रो
व्रतमा अध्याधिक चिल्लो खाने चलन छ । यो खास राम्रो हैन । चिल्लो पिरो, अमिलो खानु निकै हानिकारक हुन्छ । आलु र मैदाबाट बनेका खाद्यकुरा पनि कम खानु राम्रो हुन्छ ।
गर्भवती हुनुहुन्छ भने व्रत बस्नु हुदैन । मधुमेह, उच्चरक्तचाप र हाइपरटेन्सन छ भने व्रत नबसेको राम्रो । हालसालै अप्रेसन गरेका, भर्खर हस्पीटलबाट फकिएका कुनै पनि विरामीले व्रत बस्नु राम्रो होइन ।
मुटु, कलेजो, फोक्सो मृगौलाको विरामी र ज्वरो आएको विरामी कसैले पनि व्रत बस्नु राम्रो होइन । तीजमा सकेसम्म पानी र फलफूलको मात्रा बढाएमा स्वास्थ्यको लागि अति उत्तम ।